Madaxweyne Farmaajo iyo Amiirka dalka Qadar Tamim oo wada hadlay xili uu shir ka socdo Garoowe – Banaadir weyne
Madaxweyne Farmaajo iyo Amiirka dalka Qadar Tamim oo wada hadlay xili uu shir ka socdo Garoowe
Madaxweynaha Soomalaiya Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo), ayaa fiidnimadii Talaadada wadahadal dhinaca Tilifoonka ah la yeeshay Amiirka dalka Qadar Tamim bin Hamad Al Thani.
Sida ay shaacisay Wakaalada wararka u faafisa dowladda Qadar ee Qatar News Agency, wadahadalka labada mas’uul ayaa la xiriiray Sallaan iyo isu hanbalyeen bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan oo Isniintii todobaadkan Kow eheyd.
Arintan ayaa ku soo beegmeysa iyadoo magaalada Garoowe uu maalinkii 4-aad ka socdo wadahadal u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo laga hadlayo xiriirka DFS iyo gobolada iyo doorashooyinka guud ee dalka ku soo socda iyo kuwa maamul goboleedyada.
Lama oga in Farmaajo iyo Tamiim ay isla soo qaadeen waxa ka socda Garoowe, wuxuuse wadaahdalka ku soo aaday xili shalay lagu kala kacay wadahadal u dhexeeyay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Farmaajo iyo Xaaf ayaa isku qabtay mudo xileedka madaxweynaha Galmudug, iyadoo Villa Somaliya ay qabto in waqtiga ka dhamaaday, halka Xaaf uu rumeysan yahay in dhamaanshaha mudo xileedkiisa ay go’aan ka gaaristeeda u taalo Shacabka deegaanada Galmudug, balse isaga isu arko in xil heystiisa ka bilaabaneyso waqtigii Ahlu-Suna iyo Galmudug la mideeyay.
Si kastaba, dowladda Qadar ayaa taageero dhinacyo kala duwan leh siisa dowladda Soomalaiya, iyadoo 18-kii Febaraayo 2019 xariga laga jaray mashruuc ku kacaya $200Milyan oo lagu dhisayo wadooyinka Muqdihso ku xira Jowhar iyo Afgooye, waxaana dhismaha mashruucaas qaadaneysa shirkad Turki ah. – Universal TV Somali